Wasaaradda waxbarashada oo shaqaale laga eryey iyo kuwa cusub oo la keensaday - Caasimada Online
Home Warar Wasaaradda waxbarashada oo shaqaale laga eryey iyo kuwa cusub oo la keensaday
Wasaaradda waxbarashada oo shaqaale laga eryey iyo kuwa cusub oo la keensaday
Muqdisho (Caasimada Online) – Mas’uuliyiinta cusub ee wasaaradda waxbarashada, hidaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya ayaa la sheegay in ay shaqada ka eryeen ilaa 4 qof, oo ka tirsan shaqaalaha wasaaradda ee ku meel gaarka ah.
Shaqaalaha la ceyriyay oo isugu jira Gabdho iyo wiilal ayaa la sheegay in qaarkood ay xigto ahaayeen wasiirkii hore ee waxbarashada Xildhibaan Cabdullaahi Goodax Barre waxaana hadda badalay wasiirka cusub ee wasaaradda dhowaan loo magacaabay.
Shaqsiyaadka shaqada laga eryay ayaa lagu kala magacaabaa.
1- Maxamed Cilmi Xaanshi
2- Saadaq Mustaf Digyare
3- Axmed Salaad Guuleed
4- Xamdi Maxamed Dhicisow.
Xogta aan helnay ayaa tilmaameysa in dadkaan shaqada laga joojiyay sidoo kalane laga jartay gunno ay qaadan jireen waxaana boosaskooda la keensaday afar qof oo kale.
Gudaha Hay’adaha dowladda Soomaaliya waxaa ka jiro musuq maasuq waxaana dhibaato badan wajahaya dhallinyarada u shaqeeyo ha’adaha dowladda.